Semalt Expert dia mitory amin'ireo mpiloka lehibe indrindra eran-tany. Aoka ho azo antoka!
Raha mahazo mailaka maromaro misy rohy mankany amin'ny magazay an-tserasera na olona mangataka vola ianao, dia misy ny fahafaha-mamaky ny ID anao ary manomboka mandefa hafatra diso. Tamin'ny tapany voalohan'ny 2011, ny ankamaroan'ny spam tao amin'ny solosaintsika nampiasaina avy any Inde. Tamin'ny taona 2016, ny firenena goavambe iraisampirenena dia India (20%), Indonezia (13%), Rosia (10%) ary Korea Atsimo (12%) - dora lebanon companies directory.
Nijery an'i Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Successe an'ny Semalt , ny toe-javatra tena mahavariana momba ny spam manerantany.
Rosiana dia malaza ho mpitsikera sy mpangalatra toy ny Facebook. Araka ny Trend Micro, izay orinasan-tserasera kaliforniana fanta-daza, dia mivezivezy amin'izao fotoana izao i Rosia raha toa ka manahirana ny Internet sy ny spam. Ny tatitry ny Trend Micro dia maneho fa ny fisehoan-javatra hita maso indrindra tahaka ny nahafatesan'i Whitney Houston tampoka, ny fiakaran'ny sosopolo politika manerana izao tontolo izao, ary ny Linsanity dia nanome satroboninahitra maimaimpoana miaraka amin'ireo fitaovana ara-tsosialy sy fitaovana vaovao momba ny fampielezan-kevitra. Nanampy azy ireo hahalala sy handefa adiresy mailaka sy tamba-jery maromaro mba hahazoana ny angon-tsaintsika manokana.
Hatramin'ny valo-polo isan-jaton'ny tranonkala notontosaina tamin'ny aterineto, dia vondron'olona 100 mahery no nateraka azy ireo, ary izy rehetra dia anisan'ny andian-jiolahy. Ny anaran'ity andian-jiolahy ity dia ny Spamhaus. Ny rakitra Ofisialy momba ny Spam fantatra (ROKSO) dia niteraka olana maro ho an'ny mpampiasa aterineto..Taona vitsy lasa izay, nisy spammer iray avy any Ukraine namoaka malware sy viriosy an-tapitrisany mampiasa teknolojia manokana. Ny vohikala tranonkala spammer dia orinasan-tranonkala fampiantranoana ao Shina, nitatitra ny Trend Micro. Michael Boehm sy Associates dia fikambanana amerikana, ahitana marobe marobe. Nandefa spam sy virioma maimaim-poana amin'ny aterineto izy ireo, mamorona olana ho an'ny mpisera isan-karazany. Ny tanjon'izy ireo voalohany dia ny lisitr'ireo voasarimakirana, ary izy ireo dia niasa tamina orinasa lehibe sy anarana manokana.
Yair Shalev dia spammer-na mpitsikilo malaza avy any Florida. Niara-niasa tamin'ny spammer ROKSO, Darrin Wohl, izy mba hampivelatra teknolojia handrava fitaovana maro amin'ny ordinatera sy finday manerana izao tontolo izao. Dante Jimenez dia spammer Amerikana, izay niasa tamin'ireo mpiserasera amin'ny aterineto sy botnet ratsy indrindra eran-tany. Izy dia nandray anjara tamin'ny tetikasam-pitenenana botnet samihafa ary dia nitarika ny fanakanana ireo serivisy sy tranonkala malaza. Peter Severa dia spammer Rosiana matihanina izay nanoratra sy namidy fandaharan'asa momba ny virosy, spamware, ary botnets ho an'ny olona an-tapitrisany dolara dolara. Izy koa dia nandray anjara tamin'ny fanoratana sy famoahana ireo trozona sy viri ratsy indrindra eran-tany. Niara-niasa tamin'ny spammers Eoropeana sy amerikana samihafa izy ary niara-niasa tamin'ny spammer Amerikana, Alan Ralsky.
Nosamborin'ny FBI i Michael Persaud volana vitsy lasa izay. Nandray fepetra be dia be izy ary voampanga ho nanao fihetsiketsehana samihafa. Yambo Financials dia mpisera Okrainiana hafa izay nandray anjara tamin'ny ady amin'ny cyber isan-karazany. Namolavola fandaharam-pianarana maro be izy ary nivarotra izany ho an'ny dolara an-tapitrisany. Nanangana kaonty hosoka ihany koa izy tao amin'ny aterineto ary nangalatra vola be tao amin'ny kaontin'ny banky ara-dalàna. Hatramin'izao, ity spammer ity dia voampanga ho nanao heloka bevava isan-karazany, ary ny FBI no nanaraka azy. Na ho ela na ho haingana, ho voasambotra izy, hoy ny tatitry ny Trend Micro.